သင်၏မေးလ်များစာရင်းစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသင့်မကြာခဏသတင်းလွှာအပေါ်ဥပဒေမှ Get လုပ်နည်း
အားဖြင့် Posted: Fisayo ဖေဖေါ်ဝါရီလ 16, 2018
သင်ဖတ်နှင့်သင့်အီးမေးကို inbox ရဲ့ပေးပို့အားလုံးမက်ဆေ့ခ်ျများအပေါ်ပြုမူပါနဲ့? သူတို့ကိုသင်ဖတ်ရှုခြင်းမရှိဘဲပယ်ဖျက်ရေးအတွက်အီးမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျများကို mark လျှင်သင်ကြီးမြတ်ထုတ်ကုန်ကမ်းလှမ်းမှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်မက်ဆေ့ခ်ျများပေါ်ထွက်ပျောက်ဆုံးကြသည်မဟုတ်? သင်သည်သင်၏ပစ်မှတ်ပရိသတ်ကိုရောက်ရှိဖို့သင့်ရဲ့အဓိကနည်းလမ်းအဖြစ်အီးမေးလ်စျေးကွက်သုံးပြီးအင်တာနက်လုပ်ငန်းရှင် Are? သငျသညျကို အသုံးပြု. ပိုကောင်းရလဒ်များကိုအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ် Pulse Send.
အားလုံးလေးနက်အင်တာနက်စျေးကွက်သတင်းလွှာပေးပို့. အီးမေးလ်ကစျေးကွက်၏ဖြစ်စဉ်ကိုတစျဆငျ့, ဒစ်ဂျစ်တယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာသူတို့ရဲ့မေးလ်စာရင်းအတွင်းအလားအလာဖောက်သည်သူတို့ကိုယ်သူတို့စျေးကွက်မှမကြာခဏသတင်းလွှာကိုသုံးပါ. အီးမေးလ်ကစျေးကွက်ကနေတစ်ဆင့်ကိုယ်ပိုင်သတင်းလွှာပေးပို့ခြင်းသည်သင်၏ subscriber များအားရောက်ရှိဖို့အများဆုံးတိုက်ရိုက်နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါပြဿနာသို့သော်အများဆုံးအီးမေးလ်က subscriber များအားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအီးမေးလ်များကိုဖွင့်လှစ်ကြဘူးကြောင်း; နှင့်အင်တာနက်စျေးကွက်ပြုတဲ့ subscribers ၏နံပါတ်မသိရပါဘူး.
SendPulse Enter. ဒါဟာသင့်ရဲ့ subscriber များအားဖတ်ပါနှင့်သင့်သတင်းလွှာအပေါ်ပြုမူရနိုင်သည့်မှတဆင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်. သင့်ရဲ့သတင်းလွှာကိုတုံ့ပြန်ရန်သင့်အီးမေးလ်စာရင်းထဲမှာရတဲ့ကျော်လွန်, SendPulse ကြလေရာရာ၌သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုသင်၏ပစ်မှတ်ပရိသတ်ကိုရောက်ရှိရန်သေချာစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်, ခပ်သိမ်းသောကာလ, နှင့်မလွဲမသွေမပါဘဲ. သင်သည်သင်၏ subscriber များအား၏ကျောက်ပြားပေါ်မှာပိုက်ဆံစွန့်ခွာရန်ဆန္ဒရှိဘူးဆိုရငျ, SendPulse သူတို့ကိုနာရီအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးဆောင်ရဖို့အကြံပြုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်.
SendPulse သုံးခုကိုအဓိကနည်းလမ်းသင့်အီးမေးလ်စျေးကွက်လိုအပ်ချက်အစေခံရန်တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်. ဤတွင်သူတို့ဖြစ်ကြသည် -
တိုးမြှင့် Clickthrough အီးမေးလ်များ
ဒါဟာသင့်ရဲ့ပစ်မှတ်ပရိသတ်ကိုရောက်ရှိဖို့ရန်သင့်အားစဉ်ဆက်မပြတ်အီးမေးလ်စျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုများအပေါ်အားကိုးကြောင်းစံချိန်အပေါ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်. သို့သော် SendPulse ထပ်မံသင့်ကိုကူညီပေးပါလိမ့်. ဒါဟာသင့်ရဲ့ subscriber များအားတစ်ဦးအပိုဆောင်းမှာသူတို့အပေါ်မှာသင့်ရဲ့အီးမေးလ်များနှင့်လုပ်ရပ်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းသေချာ 50% အောင်မြင်မှုနှုန်း. သင့်ရဲ့သတင်းလွှာကိုတုံ့ပြန်ရန်စာရင်းပေးသွင်းထားသူမြား၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုအထိမြင့်တက်လာတဲ့အခါ 50%, သင်ပိုမို Pre-ရောင်းအချို့ရှိနိုင်ပါသည်.
ဤတွင်သင့်အီးမေးလ်စျေးကွက်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအတှကျအ SendPulse သုံးပြီး၏အကျိုးကျေးဇူးများများမှာ -
SendPulse ရဲ့ SMTP ဆာဗာ မသက်ဆိုင်သည့်လက်ခံသူများ '' အီးမေးလ်များကို protocol များ၏အီးမေးလ်တွေရဲ့ Deliverable သေချာ
အီးမေးလ်များကိုတုံ့ပြန်မှုလုပ် artificial ထောက်လှမ်းရေး, ပွင့်လင်းသောအီးမေးလ်များအပေါ်စာရင်းဇယားနှင့်အတူ, နှင့် Scheduler အထူးသရက်စွဲများမှာအီးမေးလ်များကိုထွက်မပို့ဘို့.
Web ကို Push ကိုအသိပေးချက်များ
Web ကိုတွန်းအားပေးအကြောင်းကြားစာသူတို့အီးမေးလ်များသို့ logged သို့မဟုတ်ကြသည်မဟုတ်ရှိမရှိအားလုံး devices များပေါ်တွင်သင်၏ subscriber များအားရောက်ရှိဖို့တခု option တစ်ခုဖြစ်သည်. ဒါဟာတကယ်ကိုယ်ပိုင်မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်အတူသူတို့ရဲ့အီးမေးလ်စာပုံး populating မပါဘဲသင်သည်သင်၏မေးလ်စာရင်းစာရင်းသွင်းသူကိုဝင်ရောက်ထောက်ပံ့. ဝဘ်တွန်းအားပေးမှုနှင့်အတူ, သင်သည်သူတို့အင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်မဟုတ်သောအခါ၌ပင်အရေးကြီးသော updates များကိုသင့်ရဲ့ subscriber များအားအကြောင်းကြားနိုင်ပါတယ်.
SendPulse အကြောင်းကြားစာနည်းပညာမသက်ဆိုင်မိမိတို့၏ Device များနှင့် browser ၏ push မက်ဆေ့ခ်ျနှင့်အတူ subscriber များအားလက်လှမ်းမှီဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်. အဆုံးစွန်ရည်ရွယ်ချက်သည်သင်၏စာရင်းသွင်းသူကိုဖြတ်ပြီးသင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုရသူတို့ကိုမသက်ဆိုင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုရှာဖွေခွအေနမြေား၏ပေါ်မှာပြုမူရရန်ဖြစ်ပါသည်. Web ကိုတွန်းအားပေးအကြောင်းကြားစာများကအီးမေးလ်ဝင်စာများရေအလွန်ထူထပ်ပါဘူး, သေး subscriber များအား၎င်းတို့ကိုခံယူခြင်းနှင့်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်မက်ဆေ့ခ်ျနှင့်အတူသက်သေ clickthrough နှုန်းထားများလက်ခံရရှိ.
bulk SMS ကို
အမြောက်အများကို SMS ပေးပို့ခြင်းအဲဒီမှာအမျိုးမျိုးသောစနစ်တွေထွက်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့် SendPulse ထိုသူအပေါင်းတို့မည့်ဟန်ရှိပါသည်. SendPulse ရဲ့အမြောက်အများကို SMS နည်းပညာနှင့်အတူ, သငျသညျထောင်ပေါင်းများစွာ၏ပေးပို့နိုင်ပါတယ် စိတ်ကြိုက်မက်ဆေ့ခ်ျ သူတို့ရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းများပေါ်တွင်သင်၏စာရင်းသွင်းသူ. သင့်ရဲ့ subscriber များအားသင့်ရဲ့သတင်းလွှာကိုဖတ်ရှုသို့မဟုတ်တွန်းအားပေးအသိပေးချက်များကိုလက်ခံရရှိရန်သူတို့၏အီးမေးလ်များသို့ log မတတျနိုငျသည်အဘယ်မှာရှိ, သင်သည်မည်သည့်ကိစ္စများမပါဘဲသူတို့ကို SMS ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်. တစ်ခုတည်းကလစ်နှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏ subscriber များအားထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရန်တူညီစိတ်ကြိုက်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့နိုင်ပြီးမှာနီးပါးဟာသူတို့ရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းများမှတူညီတဲ့အချိန်နှင့်ယခုအချိန်တွင်ကယ်လွှတ်ကြပြီ.
သင်က SendPulse အကြောင်း Else ကိုဘာတွေသိထားရမည်?
SendPulse အင်တာနက်စျေးကွက်နှင့်အခြားအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပူဇော်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်. ထိုအထဲကတချို့ဟာများမှာ -
အထူးသဖြင့်ရက်စွဲများမှာပေးထားအီးမေးလ်များကိုထွက်မပို့ဘို့ Scheduler ကို
ဝဘ်ဧည့်သည် '' အီးမေးလ်များကိုစုဆောင်းဘို့ subscription ပုံစံများ
အီးမေးလ်ကပွင့်လင်းမှုနှုန်းကိုတိုင်းတာဘို့ analytics, လင့်များနှိပ်လိုက်အဖြစ်စာရင်းပေးသွင်းထားသူ၏တည်နေရာ
အမျိုးမျိုးသော CMS သို့နှင့်အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးပလက်ဖောင်းနှင့်အတူလွယ်ကူသောပေါင်းစည်းမှု
အထိပေးပို့ဖို့ Liberty 15,000 တစ်လလျှင်အခမဲ့စိတ်ကြိုက်အီးမေးလ်များ
SendPulse အွန်လိုင်းစျေးကွက်၏အားလုံးအမျိုးအစားများ၏လိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းဖို့အထိမြေပြင်ကနေတည်ဆောက်ခဲ့. ဒါဟာစျေးကွက်များအတွက်စျေးကွက်အားဖြင့်အင်ဂျင်နီယာခဲ့သည်, နှင့်၎င်း၏ဘက်ပေါင်းစုံအတုထောက်လှမ်းရေး subscriber များအားချောမွေ့စွာလျာထားသောလုပ်ရပ်များလုပ်ဆောင်မှရနိုင်. SendPulse တိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တိုးတက်လာသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများယနေ့သက်ဝင်စေသင့်ကြောင်းသစ်ကိုပိုက်ဆံ-ချမှတ်ခြင်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်; ပြီးတော့, အားလုံးဆိုဝှက်ထားသောတာဝန်ဝတ္တရားမရှိဘဲသုံးစွဲဖို့အတှကျကအခမဲ့ကြွလာ.
မှတ်ချက်ပေးရန်ကိုပထမဦးဆုံးဖြစ် အပေါ် "Pulse Send: သင်၏မေးလ်များစာရင်းစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသင့်မကြာခဏသတင်းလွှာအပေါ်ဥပဒေမှ Get လုပ်နည်း"